အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွက် အကျိုးပြုနေပါသလား။ – Page 12 – Petunity
Shar Pon Taw
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွက် အကျိုးပြုနေပါသလား။
နိုဝင်ဘာလဆိုတာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို မိမိတို့၏ သားသား မီးမီး/ အဖော်မွန်လေးများအဖြစ် မွေးစားတဲ့လ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အိမ်မှာမွေးထားခြင်းဟာ သူတို့လေးတွေအတွက်သာမက ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပါ ကောင်းပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ပက်ယူနတီကနေတဆင့် မွေးစားထားတဲ့ ကိုကို၊ မမ တို့ကိုကော၊ ဒီအတိုင်းအပြင်ကနေလိုအပ်လို့ မွေးစားပေးကြတဲ့ ကိုကို၊ မမ တို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ "ကိုကို၊ မမတို့က အလွန်လေးစားစရာကောင်းတဲ့သူတွေပါလို့"
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေက သူတို့ရဲ့ သခင် လူသားအဖော်မွန်တွေရဲ့ ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုအကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျကျ သုတေသန လုပ်ထားပါတယ်။
(၁) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု/ တန်ဖိုးထားမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်ထဲမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော သုတေသနတစ်ခုတွင် “အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးတဲ့သူတွေဟာ မမွေးတဲ့သူတွေထက် မိမိကိုယ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားမှု ပိုအားသာကြတယ်” ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေထက် ပို၍ သွက်လက်ကြတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိကြတယ်။ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီး ကြောက်ရွံ့မှု ပိုနည်းကြပါတယ်။
(၂) သူတို့တွေဟာ ဓာတ်မတည့်ခြင်း(allergies) တွေရဲ့ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဟာ ဓာတ်မတည့်ခြင်း (allergies) တွေဖြစ်နိုင်ချေ ပိုနည်းတယ်ဆိုတာ လူအများရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ကောင်း ဆန့်ကျင်နေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ အထိအတွေ့များခြင်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့မဆို ဓာတ်မတည့်ခြင်းတွေမှ လျော့နည်းစေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော သုတေသန တစ်ခုတွင် “မွေးကင်းစကတည်းက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အခြားတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဓာည့်မတည့်မှုတွေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းတတ်ကြပါတယ်” ဆိုတာဖော်ပြထားပါိတယ်။
(၃) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆိုးမြင် အတွေးတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
လူအများစုဟာ ဆိုးရွားတဲ့ လူမှုရေး အတွေ့အကြုံ/ ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့/ ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါ မိမိအပေါ်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းတွေးခြင်းဟာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေကို လျော့နည်းစေတတ်သလို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအကြောင်းတွေးခြင်းဟာလည်း တူညီတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေပါတယ်။
(၄) တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အထီးကျန်ဆန်မှုတွေ နည်းပါးစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေးစားတန်ဖိုးထားမှု (Confidence) မြင့်တက်စေပြီး အထီးကျန်ဆန်မှုတွေ အလိုလို လျော့နည်းစေပါတယ်။
(၅) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့တွေကို အကူအညီ အထောက်အပံ့များစွာပေးပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ “ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို မိမိအိမ်၊ မိသားစုအပြင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဆီကလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။"
(၆) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကျန်းမာသန်စွမ်းနေဖို့ကိုလည်း များစွာအထောက်အကူပေးပါတယ်။
သင့်ခွေးကလေး/ ကြောင်ကလေးက သူ့ကိုအာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်နေစဉ်တွင် သင့်အနေနဲ့ ဆိုဖာပေါ်မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး ဇိမ်ခံနေတာမျိုး၊ TVထိုင်ကြည့်နေတာမျိုးတွေလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တွေဟာ တခြားသူတွေထက်ပိုပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး သွက်လက်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့တူတူဆော့၊ သူတို့နဲ့တူတူလမ်းလျှောက်၊ သူတို့ကြိုက်တာလေးတွေလုပ်ပေးရတာ အမောလေ။
တကယ်တော့ ခွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ပို၍ လမ်းလျှာက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ရောလူပါ ပိုကျန်းမာစေပါတယ်။
(၇) သူတို့လေးတွေဟာ အခြားသူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးပေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အခြားသူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးပေးပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သဘာဝအတိုင်း စကားပြောဆိုမှု စတင်သူတွေဖြစ်ပြီး အခြား တိရစ္ဆာန်ချစ်သူတွေကိုပါ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။
(၈) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ သွေးပေါင်ချိန် တည်ငြိမ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲံ သွေးပေါင်ချိန်ကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးတဲ့သူတွေဟာ မမွေးတဲ့သူတွေထက်ပို၍ သွေးပေါင်ချိန် ပိုတည်ငြိမ်ကြပါတယ်။ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို သိတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို မွေးမြူကြပါတယ်။
က်ုယ်တွေကတော့ ချစ်လို့ကို မွေးတာ။ ;)
(၉) သူတို့လေးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့နည်းစေပါတယ်။
“ကြောင်/ ခွေးမွေးခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့နည်းစေပါတယ်” လို့တိရစ္ဆာန်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Arden Moore ကဆိုပါတယ်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အိမ်ထောင်ဖက်တွေထက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့နည်းဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခြွင်းချက်မရှိတဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ သူတို့ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအဖြစ် သဘောမထားဘဲ မိသားစုဝင်များအဖြစ်သဘောထားခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Credit: Health Benefits Of Pets, Kayla Matthews, Contributor (Huffington Post blogger) — feeling Let's adoptapet! at Petunity.
Hear from us, we are pets!
Copyright © 2021, Petunity.